छोराले आ’मालाई जिउँदै ल’गाए आ’गो, अस्पतालमा ग’यो ज्या’न ! – ABC NEWS 24
एजेन्सी – छोराले आमालाई जि’उँदै ल’गाए आगो, अस्पतालमा ग’यो ज्या’न ! छोराले आमालाई जि’उँदै ल’गाए आ’गो, अस्पतालमा ग’यो ज्या’न काठमाण्डौं । आमालाई ममताकी खानी मानिन्छ भने सन्तानलाई कर्तब्यका उदाहरण । तर भारतमा एक छोराले आफ्नै आ’मामा’थि गरेको घ’टनाले सबैको जि’उ काँ’प्छ । उत्तर प्रदेशको शाहजहाँपुरमा एक छोराले आफ्नी आमालाई म’ट्टितेल ख’न्याएर आ’गो ल’गाएका छन् ।*** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
उपचारका क्रममा ती महिलाको अस्प’तालमा ज्या’न गएको छ । दैनिक भाष्करमा छापिएको समाचार अनुसार, घर छुट्टिने बिषयमा आमा र छोरा बीच वि’वाद भएको थियो । ती पुरुष बि’रुद्ध उनका भाईले उ’जुर गरेका छन् । कान्छो छोराको उ’जुरीमा प्रहरीले ज्या’न लिने छोराका वि’रुद्ध मु द्दा दर्ता गरेको छ। यो कुरा जलालाबाद पुलिस स्टेशनको क्षेत्रको हो । यहाँ मोहल्ला नौसरा निवासी ५८ वर्षीया रत्न देवीको आफ्नो छोरा आकाश गुप्तासँग सम्पति बाँ’ड्ने बिषयमा वि’वाद भएको थियो ।
आइतबार, यस बारेमा आमा र छोरा बीच केही व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा एक पञ्चायत भयो । सम्झौता पञ्चायतमा गरिएको थियो ।.यो घ’टनापछि छोरा आफ्नी आमासँग रि’साउन थाले । सम्पूर्ण परिवार आइतवार रात सु ति रहेका थिए । कान्छो छोरा किशन गुप्ताले भने कि रातमा मौ’का पाउने बित्तिकै दाजु आकाशले आमामा मट्टितेल हा’लेर आ’गो लगाइदिए । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
← हवल्दार कि श्रीमती सिपाही संग भा*गे पछि देख्ने जति सबै च*कित | उदयपुरमा हेर्नुहोस् (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
मनोज गजुरेल सि किस्त भएपछि पूर्वपत्निको भा*बुक संदेश,पुर्बश्रीमानलाई छिट्टै निको नभएसम्म पुजा गरिरहने (भिडियो सहित हेर्नुहोस) →